Dhizaini Dhirowa Dhizaini Vagadziri uye Vatengesi - China Dhizaini Dhizaini Dhizaini Fekitori
Nhanganyaya Villa: Icho chinongedzo chakaringana chekugara kwemhuri uye chirevo chakafanana choumbozha, yepamusoro-kumagumo, kuvanzika uye hupfumi. Iyo inogara gadheni yakavakirwa mumasabhabha kana nzvimbo dzinoyevedza dzekupora. Inzvimbo yekunakidzwa nehupenyu. Zvinowanzo nzwisiswa kuti, pamusoro pechakakosha basa re "kugara" senzvimbo yekugara, iyo yepamusoro-grade pekugara, inonyanya kuratidza hupenyu hwehunhu uye hunhu hwekunakidzwa, uye yakazvimiririra yekugara gadheni mune yanhasi meani .. .
Nhanganyaya technical simba rekambani: Iyo kambani ine vanogadzira vanomwe, vatatu vakaumbwa dhizaini, 2 mapurani ekugadzira, uye 1 mvura nemagetsi dhizaini, vatatu vavo vakashanda mukugadzira dhizaini kweanopfuura makore matatu. Mune inoenderana indasitiri yehunyanzvi, hushoma hunoshanda hupenyu hwevakagadziri makore mashanu, uye hwakawanda hupenyu hwekushanda hwasvika makore gumi nematatu. Dhizaini yesimbi mamiriro dhizaini inosanganisira: (zvivakwa zvehofisi, mahotera, dzimba dzevaeni) uye mamwe mafuremu ...